Gass Beads China Manufacturers & Suppliers & Factory
Gass Beads - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Gass Beads)
JIS R3301 Fahazavana S-Brilliance Glass Beads Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho ireo glasy vita amin'ny gilaika ara-panandramana miaraka...
Ity kofehy vita amin'ny randran-tseza avo lenta ity dia vita tamin'ny raki-peo. Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho ireo glasy vita...
S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny felam-paty mafana Kitapo vita amin'ny vera, fantatra ihany koa amin'ny endriky ny vera, microspheres, na microparticles, dia efa nampiasaina nandritra ny 80 taona tamin'ny famantarana sy ny marika famantarana. Vitsy kely ny kavina niparitaka teo amin'ny...
BS6088 Class A / B dual-coated Glass Beads
Ireo kofehy vita amin'ny hoditra manokana, amin'ny famokarana kofehy vita amin'ny vera, izay hanatsara ny toetran'ny fanamafisana ny hafanana sy ny fanesorana ny labozia. Etsy ankilany, ny vanim-potoan'ny vanona fitaratra dia mety maharitra, ary izany dia manatsara ny fitaratra amin'ny...
High Retro-Reflection Fiber-Proof Glass Beads
Manerana an'izao tontolo izao, ny lalana dia tena azo antoka kokoa androany noho ny fampiasana siramamy kely vita amin'ny sphéphones izay ampiana ireo lalam-baravaran'ny làlan-kaleha vaovao izay efa nampiharina. Vita amin'ny maromaro ihany ny marika hita maso amin'ny alina. Io trangan-javatra io...
High Roundness Heavy Metal Reflective GlassBeads
BS6088 Reflective Beads for Paint Painting Thermoplastic
Kofehy mibontsina amin'ny sary hosodoko Standard Standard BS6088 Class B. Glass Beads Sieve size(micron) % Retained 850 0 – 5 % 600 5 – 20 % 300 30 – 75 %
Gass Beads High Glass Beads Micro Glass Beads Premix Glass Beads Glass microbeads Endrika Glass Beads American Glass Beads Big Glass Glass Beads